Maraykanka;”Waa in si deg-deg ah loo qabtaa Doorashada Soomaaliya.” - Jowhar somali news leader
Home NEWS Maraykanka;”Waa in si deg-deg ah loo qabtaa Doorashada Soomaaliya.”
Maraykanka;”Waa in si deg-deg ah loo qabtaa Doorashada Soomaaliya.”
Wasaarada Arrimaha Dibbada Maraykanka ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dowlada Maraykanka ay ka walaacsan tahay jahwareerka Doorashooyinka ee ka jira Soomaaliya, waxana uu ugu baaqay madaxda Soomaaliya in doorasho deg-deg ah la qabto.
Qoraalkan oo ka soo baxay xafiiska xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa cinwaan looga dhigey ”Waa in si deg-deg ah loo qabtaa Doorashada Soomaaliya.” waxana qoraalka lagu bilaabay;
“Mareykanku wuxuu aad uga walaacsan yahay jahwareerka doorashooyinka ee ka jira Soomaaliya, taasoo abuureysa hubanti la’aan siyaasadeed oo khatar ku ah amniga, xasilloonida, iyo horumarka dalka. Waxaan ugu baaqeynaa madaxda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah Soomaaliya in ay dhinac iska dhigaan ujeeddooyinka siyaasadeed ee cidhiidhiga ah, ayna ilaaliyaan waajibaadka ka saaran dadka Soomaaliyeed, ayna oggolaadaan in si deg deg ah loo qabto doorasho hufan oo loo dhan yahay.”ayaa lagu yiri qoraalka.
“Caqabada hada jirta waxay wiiqeysaa horumarka la sameeyay ilaa maanta, waxay dib u dhigeysaa dib u habeynta si deg deg ah loogu baahan yahay si Soomaaliya ay ugu sii socoto wadada loo marayo cafinta deynta oo dhameystiran, waxayna caqabad ku tahay la dagaalanka argagixisada. Mareykanku wuxuu taageerayaa xuquuqda muwaaddiniinta Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay ku mudaaharaadaan si nabad ah oo ay si adag uga soo horjeedaan adeegsiga rabshadaha ee koox kasta.”ayaa lagu yiri qoraalka.
Ugu dambeyntii qoraalka ayaa lagu yiri; “Waxaan ka codsaneynaa madaxda Soomaaliya inay ilaaliyaan mustaqbalka dalka oo ay helaan heshiis si dhakhso leh loogu qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha.”
Previous articleTirada dadka uu soo ridanayo Covid 19 oo ku sii kordhaysa gobolada dalka Soomaaliya
Next articleWHO urges countries to continue launching AstraZeneca vaccine